Jordan oo taageero dhaqaale ka heshay Xulafada Sacuudiga & EU-da |
Jordan oo taageero dhaqaale ka heshay Xulafada Sacuudiga & EU-da
Jordan (estvlive) 11/06/2018
Dalalka Khaliijka gaar ahaan Sacuudiga, Imaaraatiga iyo Kuwait ayaa u balan qaaday dowlada Jordan (Urdun) dhaqaale gaaraya 2.5 bilyan oo dollar, xili dalkaasi uu la tacaalayo banaanbaxyo iyo hoos u dhac ku yimid dakhliga dowlada.
Midowga Yurub ayaa iyaguna Axadii shalay sheegay in lacag gaareysa 23 milyan oo dollar ugu deeqeen xukuumada Jordan.
Todobaadyadii lasoo dhaafay ayey wadankaasi Urdun ka socdeen banaanbaxyo ay shacabka dhigayaan oo looga soo horjeedo qorshaha Xukuumada ay ku dooneysay inay sare ugu qaado canshuurta dalkaasi, qorshahaasi oo ay shacabka si adag uga horyimaadeen.
Boqorka dalka Urdun Cabdallah ayaa todobaadkii hore bedalay Raysalwasaarihii xukuumadiisa, balse waxaan weli joogsan banaanbaxa.
Dalka Urdun oo aan lahayn wax-soo-saar badan ayaa dhaqaalihiisa si weyn ugu xirnaa taakulada dhaqaale oo ay ka heli jireen dalalka Khaliijka oo uu hoos u dhac ku yimid sanadihii tagay.
Xukuumada dalkaasi ayaa sanadkii hore dayn ka qaadatay hay’ada IMF, waxayna hay’adaasi ku khasabtay dalkaasi inuu wax ka bedalayo nidaamkiisa canshuurta, si ay u buuxiyaan shuruudaha daynta ay qaateen, hase yeeshee shacabka ayaa diiday inay aqbalaan canshuurta lagu kordhiyey mushaharka shaqaalaha dalkaasi oo horey uga cabanayey mushaharkooda yar iyo sicir bararka dalkaasi ka jira.